Top 10 égwu Ka ibupute foto na si iPhone
E nwere dị iche iche nke foto ebipụta ngwa ọdịnala n'ihi iPhone. Ụfọdụ na-akwụ ụgwọ na free ngwa Njirimara karịa nkwado maka ọrụ. Na ndabere nke ọha fim ma nyochaa, e anyị gbalịrị ịchọta ndị kasị ewu ewu 10 ngwa ibipụta foto site na iPhone. Ndị niile na ngwa dị nnọọ irè n'ihi nzube nke-ebi akwụkwọ na foto nkekọrịta. Ka na-lee anya na top 10 foto obibi akwụkwọ ngwa ọdịnala n'ihi iPhone:
Nkebi nke 1: Overview nke Top 10 égwu Ka ibupute foto na si iPhone
Part 2: Key atụmatụ maka Top 10 iPhone Photo Printing égwu
2. PostalPix Photo Mbipụta 4+ Free
3. Bipute Studio 4+ Free
5. PhotoBox - Bipute & Onyinye 4+ Free
7. Bipute Ime Anwansi 4+ $ 1.9
8. Shutterfly maka iPhone 4+ Free
9. Bipute n Share 4+ $7.99
10. Bipute forte Little 4+ Free
Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-akasị eji Walgreen maka ahịa ọgwụ nzube, ị ga-ekweta na ọ bụ nakwa ezi ngwa ibipụta foto site iPhone. Ị nwere ike iji ya ngwa ngwa ibipụta photos na ị gị iPhone, Facebook, na Instagram. Tupu ígwè obibi akwụkwọ foto gị site na iPhone, ị nwekwara ike na-etinye edezi ngwaọrụ ka unu mma Photos. Wezụga ya, ọ na-enyere gị na-eme ka foto kaadị site na-agbakwụnye ederede na itinye dị iche iche ndebiri.
2) PostalPix Photo Mbipụta
PostalPix foto Mbipụta bụ a free ngwa na-atụgharị foto gị site na iPhone n'ime siri ike ụdị - ezigbo Mbipụta. Na ya, i nwere ike dị ịtụ Mbipụta na ị na captures na gị iPhone. N'ezie, ọ-enye gị ohere họrọ Bipute size, ukwu na-akwụ ụgwọ maka ebipụta. Na mgbe ahụ n'ime 24-48 awa, ị ga-enweta gị Mbipụta n'ọnụ ụzọ gị. N'ihi na n'aka, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kasị mma ọ bụrụ na ị chọrọ ibipụta foto gị si na-ezite ha ka ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ dị ka onyinye.
3) Bipute Studio
Bipute Studio-enye gị ohere ịtụ Mbipụta gị iPhone photos. Ọ na-ekwe ka i mee gị onwe gị foto akwụkwọ na nnukwu format Mbipụta. E nwere 4 ebipụta nha na multiple oge gboo etiti Mbipụta n'ihi na ị na ịhọrọ site na.
LifePics-enye gị ohere ka gị iPhone foto Mbipụta site na LifePics Photofinisher netwọk. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike bulie ebipụta gị iPhone photos na a Obodo ụlọ ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na ngwa, mgbe ahụ, gị iPhone foto Mbipụta ga-Ẹnam ekese n'ọnụ ụzọ gị. Ọ bụ nnọọ mfe iji: mgbe wụnye ngwa, họrọ foto gị iPhone na ịtụ ha site na photofinisher.
5) PhotoBox - Bipute & Onyinye
The App atụmatụ ndị ị na ndị ahaziri onyinye, foto Foto Ụlọ Nga na kwaaji Mbipụta si gị iPhone photos. Ọhụrụ PhotoBox ngwa ị ga-ahụ 40 free elu àgwà Mbipụta na-akparaghị ókè nchekwa. A na ngwa bụ nanị dị na Europe.
6) Kick Send
Kicksend awade gị na-ebi akwụkwọ nke foto site iPhone. Ọ bụ ihe ọzọ na ngwa na-i nwere ike iji ịtụ Mbipụta gị iPhone photos na na gị iPhone. Mgbe iwu Mbipụta, ị nwere ike bulie ha elu na a Obodo Walgreens, CVS, Target ma ọ bụ Duane Reade ụlọ ahịa gị nso ma ọ bụ na-eche maka ha gị n'ebe obibi gị.
7) Bipute Ime Anwansi
N'adịghị ka ndị n'elu kwuru banyere foto ebipụta ngwa ọdịnala n'ihi iPhone, Bipute Magic bụ ihe iPhone foto ebipụta na ngwa na-ekwe ka ị jikọọ gị Wi-Fi na ngwa nbipute ibipụta foto gị. Ọ na-arụ ọrụ n'ihi na ọtụtụ Wi-Fi na-ebi akwụkwọ, na-eme ya na-ejighi eriri ibipụta foto gị zọpụta na gị iPhone.
8) Shutterfly maka iPhone
Ọ bụrụ na ị na-achọ foto onyinye, i nwere ike iri Shutterfly ịtụ foto Mbipụta gị iPhone photos. Ọ enye gị ohere ike a foto collage na ịtụ a collage na Shutterfly foto collage-ewu ihe. I nwekwara ike ịmepụta otu akaụntụ site na nke a na ngwa na bulite gị niile foto ka Shutterfly nke na-edebe. Biko mara na Shutterfly iPhone ngwa na-arụ ọrụ maka iPhone.
9) Bipute n Share
Pint n Share-enye gị ohere ibipụta gị iPhone photos site na njikọ na Wi-Fi na-ebi akwụkwọ. Na o nwere ike ibipute foto site na gị na kọmputa na-niile na-ebi akwụkwọ, gụnyere USB na Bluetooth na-ebi akwụkwọ. E wezụga ígwè obibi akwụkwọ iPhone photos, a na ngwa na-enyere gị ibipụta niile ụdị akwụkwọ, dị ka ibe weebụ, email, kọntaktị, wdg
10) Bipute forte Lite
Bipute forte lite bụ free ngwa atụmatụ ndị ahụ ala ọrụ maka ọrụ. Lelee atụmatụ.
Kpọmkwem i nwere ike iji WiFi site ngwa. E nwere ígwè obibi akwụkwọ nkekọrịta usoro.
100% ọma ọnụego nke ngwa.
Ị nwere ike ịlele ndakọrịta na gị na ngwa nbipute ntọlite.
> Resource> iPhone> 10 égwu Ka ibupute foto na si iPhone